Ebe nrụọrụ weebụ gị abụghị ọrụ | Martech Zone
Ebe nrụọrụ weebụ gị abụghị ọrụ
Monday, December 8, 2014 Douglas Karr
Anyị nọ n’etiti inyere onye ahịa ọhụụ aka weghachite webụsaịtị. Saịtị ha dị ugbu a dị ka emegoro ọtụtụ afọ gara aga wee gosi n'ụzọ ahụ. Edobere ya HTML n’enweghị nzaghachi, usoro URL siri ike, na enweghị usoro njikwa ọdịnaya dị n’azụ ya. N'oge ahụ, saịtị ahụ bụ ọrụ dị mfe ma ejiri m n'aka na ha tinyere obere ego na ya - mana ọ naghị arụ ọrụ maka ha ọ bụla.
Enwere otu mgbalị na atụmatụ ọhụrụ ahụ, nke na-ebelata nrụpụta ebe ọ bụ na ọ dabere na nkwenye n'etiti ndị egwuregwu ahụ. Anyị ejirila ọnọdụ ndị a mara mma ma rụọ ọrụ site na nsogbu na ijikwa atụmatụ n'oge gara aga.
Otu okwu metụtara abụghị saịtị ahụ ma ọ bụ imewe ya ọ bụla, ọ na-agbanwe ọdịdị nke a websaịtị redesign bụ ọrụ ma ọbụghị usoro. Enwere olile anya na-adịghị mma na nhazi ọ bụla, ọdịnaya ọ bụla, na ihe nchọgharị ọ bụla ga-ezu oke.
Ha agaghị adị.
Ha agaghị adị n'ihi na enweghị ike ibu amụma arụmọrụ nke weebụsaịtị ahụ ruo mgbe ọ dị ndụ ma ndị ọrụ na-emekọrịta ya. M na-ejikarị ụlọ ọrụ egwu egwu na ebe nrụọrụ weebụ ha bụ ọ bụghị maka ha - ọ bụ maka ndị ọbịa ha. Fọdụ na-ahụ ya iwe mgbe ha lere anya na saịtị mara mma nke ọma, ewepụtara nke ọma dịka ha ga-abụ nwa ha. Mgbe ụfọdụ nwa ha; agbanyeghị ọmarịcha, ọ naghị eme nke ọma na klas ndị ọzọ.
Ihe dị ukwuu banyere sistemụ njikwa ọdịnaya ọgbara ọhụrụ bụ na ị nwere ngwa ọrụ niile nke webụsaịtị iche. Ọ bụrụ na ịgagharị anaghị arụ ọrụ… enweghị nchekasị… chepụta nke ọhụrụ. Ọ bụrụ na imewe na-adịghị arụ ọrụ… nweta ihe ọhụrụ. Ọ bụrụ na ọdịnaya ahụ anaghị arụ ọrụ, dee ọdịnaya ọhụrụ.
Njikere, Ọkụ, Ebumnuche
At DK New Media, Anyị na-adịkarịghị dee nkwa oru ngo maka ịmegharị saịtị n'ihi na anyị ghọtara na saịtị ahụ chọrọ oge iji rụọ ma tụọ ya. Obere kachasị anyị bụ ụbọchị 90 ka anyị wee nwee ike ime mgbanwe ọ bụla nwere ike igbochi ọhụhụ ọchụchọ ma nye anyị oge maka ịtụgharị ntụgharị.
Nke a bụ ihe kpatara na ọ dị oke mkpa iji wulite saịtị gị na sistemụ njikwa ọdịnaya siri ike yana ikike ọ bụla. Mgbe saịtị gị bido, ikwesiri ịlaghachi na onye nrụpụta ma ọ bụrụ na ị na-achọ atụmatụ ọhụrụ. Mana nhazi, nhazi na verbiage kwesịrị ịbụ ihe onye ahịa nwere ike ịgbanwe.
Ọ bụrụ na anyị wepụta saịtị ọhụrụ ahụ ma ọ naghị arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ onye ahịa ahụ na-achọta atụmatụ ndị kachasị mma, nnukwu ihe bụ na anyị nwere ike ịme mgbanwe mgbe niile - ma obere ma isi. Ọ bụrụ n’ịchọrọ mmeri ọsọ ahụ, ị ​​ga-ala ezumike nká ochie wee nweta nke ọhụrụ na egwu ahụ iji malite nyocha.
Tags: weghachite webụsaịtị
Nkwupụta: 68% nke ndị isi anaghị enwe ọhụụ gbasara mgbasa ozi
Etu esi atụ ROI nke ngwa ngwa